Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Safety » Ala ọma jijiji siri ike 7.0 kụrụ Papua New Guinea
Na-agbasa News Travel • News • Akụkọ ọhụrụ Papua New Guinea • Safety • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Papua-New-Guinea-ala ọma jijiji
Ala ọmajiji ọhara 7.0 ruru Papua New Guinea na elekere asaa nke ụtụtụ nke oge. O siri ike inye ịdọ aka na ntị tsunami.
Ninglọ Ọrụ Na-adọ Aka na Ahụhụ na Pacific kwuru na ebili mmiri na-erughị 30 centimeters nwere ike ịtụ anya n'ụsọ mmiri na Papua New Guinea na agbata obi Solomon Islands.
Ala ọma jijiji ahụ mere n’otu agwaetiti dịpụrụ adịpụ nke New Britain, ọ dịghịkwa akụkọ ọ bụla metụtara mmebi ọ na-akpata. Ebe ala ọmajiji ahụ dị bụ ihe dị ka kilomita 200 na ndịda ọdịda anyanwụ nke Rabaul na omimi nke 40 kilomita.
Enweela ma ọ dịkarịa ala aftershocks 2 nwere ike karịrị 5 kemgbe ahụ.